Sacuudiga oo qabtay askar ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sacuudiga oo qabtay askar ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa shaaca ka qaaday in Ciidankooda gacanta ku dhigeen askar katirsan ilaalada kacaanka dalka Iiraan, kuwaa oo la sheegay in ay kusoo dhawaadeen biyaha dalka Sacuudiga.
Wasaarada Warfaafinta Sacuudiga ayaa sheegtay in ciidankooda Badda qabteen lix askari oo katirsan Ciidanak ilaalada Kacaanka iyo doon ay wateen , kadib markii ay kusoo dhawaadeen biyaha dalka Sacuudiga gaar ahaan ceelka saliida ee Marjan.
Sacuudiga ayaa sheega in ciidankan Kacaanka Iiraan katirsan ay qabteen ay damacsanaayeen in ay dhibaato geestaan, waxa ayna ku eedeesan doontan ay wateen askartan aad ugu soo dhawaadeen ceelka Shidaalka Marjan ee dalka Sacuudiga.
Warka kasoo baxay Wasaarada Warfaafinta Sacuudiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay baxsatay dooni kale ay la socdeen askar kale oo katirsan ilaalada Kcaaanka dalka Iiraan, waxa ayna Sacuudiga baaritaan ku wadaan ragan ay qabteen.
Dowlada Iiraan ayaa dhnakeeda beenisay in askar ay ahaayeen dadka ay qabteen Sacuudiga, waxa ayna Dowlada Iiraan tilmaantay doonta iyo raga la qabtay in ay ahaayeen Kaluumeesato ayna siyaasadeeneyso dowlada Sacuudiga oo xariir aad u xun kala dhaxeeyo.